အိန္ဒိယ: ကို 'အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ဂူမော်ဒယ်' '၏ Chidambaram သားကောင်: Digvijaya Singh က | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: ကို 'အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ဂူမော်ဒယ်' '၏ Chidambaram သားကောင်: Digvijaya Singh က | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: ကို 'အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ဂူမော်ဒယ်' '၏ Chidambaram သားကောင်: Digvijaya Singh က | အိန္ဒိယသတင်း
ဘိုပါးမြို့မှာ: အဆိုပါကွန်ဂရက်အကြီးအကဲ Digvijaya Singh က သောကြာနေ့ကို "စံပြလျှောက်ထားရန်ဗဟိုမှာ BJP အစိုးရစွပ်စွဲ ဂူ မှားယွင်းသော "အမှုပေါင်း" အပြစ်မဲ့အတွက်ပေးအပ်တဲ့ "အုပ်ချုပ်မှုစနစ်။
Singh ကယခင်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဟောင်းပါတီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, P ကိုကပြောပါတယ် ချီဒမ်ဘာရမ် INX ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိုပါလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအမှု၌ဖမ်းဆီး Tihar အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိနေသေး၏, မဟုတ်မမှန်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သညျ။
"ဒီအစိုးရ (အလယ်) ကိုရန်လိုမုန်းတီးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသူတို့ဂူထဲမှာပြုသမျှအတိုင်း, ပါဝါရှိလူ, ဂူ၏အုပ်ချုပ်မှုပုံစံအကောင်အထည်ဖော်အပြစ်မဲ့နှငျ့ပတျသကျသော, မမှန်သောရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှတ်ပုံတင်နေကြတယ်, Singh ကသတင်းထောက်များကိုပြောသည်။
ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် အာဏာတည်ခြင်း၏ညွှန်ကြားမှု ချီဒမ်ဘာရမ်နဲ့စီးပွားရေးသမား Ratul Puri ဆန့်ကျင် (ED), တူလေး Madhya Pradesh ဝန်ကြီးချုပ် Kamal Nath ။
သူ Puri ဆန့်ကျင် ED ကိစ္စတွင်အကြောင်းကိုလျက်ချော့မော့အဝိဇ္ဇာ, တစ်ဦးကငွေခဝါချမှုအမှု၌ရပ်တန့် အဆိုပါလိမ်လည်မှု VVIP Chopper ကချိတ်ဆက်။
ချီဒမ်ဘာရမ်ဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းရာတွင် Singh ကသူ့ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကဆိုသည်။
"ငါကရိုးရိုးသားသားလူတစ်ဦးနှင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ဘယ်တော့မှထားပါတယ်, 1984-1985 လူသိများပါတယ်။
ကွန်ဂရက်၏ခေါင်းပေါ်ကဆက်ပြောသည်: အဆိုပါ BJP (ရွှေဝါရောင်ပါတီ 15 2003 မှပါလီမန်အာဏာ၌ရှိ၏) 2018 နှစ်တာကာလအတွင်းပါဝင်ရရန်ကြိုးစားခဲ့သိရသည်။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှအမှုရှိ၏။
သူတို့သညျငါ့ကိုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့ပါလျှင် "ဘာမျှမဝင်ငွေအခွန်, ဝင်ငွေအခွန်သို့မဟုတ်ငါ့တဘက်၌ငွေကြေးခဝါချမှု, အရေးပေါ်၌ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ရှိပါတယ် ... , ငါသည် '' င့်နိုင် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသူတို့ကိုဆန့်ကျင်? "အမတ် Rajya ဆာဘားကပြောသည်။
Madhya Pradesh အတွက်ကွန်ဂရက်အစိုးရတစ်ဦးတည်းကရြောကျမယ်လို့ထပ်လောင်းရှိသည်ဟု BJP ခေါင်းဆောင်များအကြောင်းကိုမေးသော်, Singh က said: "ဒီ BJP ခေါင်းဆောင်များသူတို့ဆန့်ကျင်၌ရှိကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေဟာအစာကြေနိုင်ကြသည်မဟုတ်။
ပါဝါကိုခံစား၏ "ကျင့်။ သူတို့ (15 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်) ပြည်နယ်အာဏာဆုံးရှုံးပြီးနောက်ဒါစိတ်ဆိုးကြသည်။ "
အိန္ဒိယ: ကွန်ဂရက်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Tihar အကျဉ်းထောင်တွင်မှ P ကို ​​Chidambaram နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက် | အိန္ဒိယသတင်း
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး: အမာလီ 324 သန်းတောင်းဆိုချက်အရ